Izindaba - Izidingo zokusetshenziswa nokuphepha kwe-aminoguanidine hydrochloride
Izidingo zokusetshenziswa okuphephile
Naka ukuphepha lapho usebenzisa i-aminoguanidine hydrochloride, ngoba iyikhemikhali enobuthi. Uma kunenkinga yokuphepha, ingahle ilahlekelwe ngokungenakulinganiswa. Okulandelayo yizidingo zokusetshenziswa okuphephile.
1. Kumele senze umsebenzi omuhle ekuvikeleni ukuphepha. Abasebenzi kufanele bagqoke okokuvikela ukugwema ukuthintana ngqo namakhemikhali anobuthi.
2. Yenza umsebenzi omuhle ekuvikeleni ukuvuza. Uma ukuvuza sekuvele, kuzoletha izinsongo zokuphepha emvelweni nakubasebenzi.
3. Ngemuva kokusetshenziswa, phatha amagilavu ​​avezwe ku-aminoguanidine hydrochloride.
Ngamafuphi, ukusetshenziswa kwe-aminoguanidine hydrochloride kunezidingo eziqinile futhi ngeke kusebenze ngokungaboni. Ukusebenza okulungile kungaqinisekisa ukuphepha. Uma unemibuzo, thintana nomenzi wamakhemikhali ochwepheshe.
Njengekhemikhali enobuthi, i-aminoguanidine hydrochloride inezidingo eziphakeme zemvelo zokugcina. Uma ingagcinwanga kahle, kulula ukuphazamisa ukusebenza futhi ibangele nezingozi zokuphepha. Amaphuzu amabili alandelayo kufanele anakwe ngesikhathi sokulondolozwa.
1. Gcina endaweni epholile
Ngoba i-aminoguanidine hydrochloride izobola uma ishiswa, futhi iyinto enobuthi, kufanele ibe nomthelela emvelweni ngemuva kokubola. Ngakho-ke kufanele ibekwe endaweni epholile, ukuze kungabikho ukushintsha komoya okushisa.
2. Kubekwe uphawu ngokwehlukana
I-Aminoguanidine hydrochloride kufanele ipakishwe futhi ivalwe ngokwehlukile. Ayikwazi ukugcinwa namanye amakhemikhali. Ngemuva kwakho konke, inobuthi. Kuyadingeka futhi ukubeka izimpawu zokuxwayisa ngokuphepha ezindaweni ezigqamile endaweni yokugcina izimpahla. Le yindlela ephumelelayo yokuqinisekisa ukuphepha.
Izinyathelo zokuphepha zokugcina i-aminoguanidine hydrochloride zethulwa lapha. Lapho ugcina, kufanele uyinake, ukuze uqiniseke ukuthi ukusebenza akuphazamiseki.